Degso WinZip loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (0.95 MB)
WinZip, waa mid kamid ah softiweerradii ugu horreeyay ee maskaxdaada kusoo dhaca markay timaaddo faylka wax lagu duubo iyo barnaamijka iskudajinta faylasha la isku cadaadiyay, shaki laaan waa mid kamid ah barnaamijyada keydka loogu isticmaalo adduunka. Aad iyo aad bay u badan tahay in isticmaaleyaal badani ay jiraan WinRAR ama WinZip.
WinZip; .zip, .rar, .tar, .bz2, .zipx, .7z, .cab, .jar, GZIP (.gz, .taz, .tgz), BZ2 (.bz, .bz2, .tbz, .tbz2) , LHA / LZH (.lha, .lzh), Golaha wasiirada (.cab), Sawirka muuqaalka (.img, .iso), Compress (.tz, .z), UUencode (.uu, .uue), XXencode (.xxe) )), MIME (.b64, .mim), BinHex (.bhx, .hqx) wuxuu kuu ogolaanayaa isku duubid badan oo feyl ah ama qaabab feylal ah. Sidan oo kale, waad ku kaydin kartaa faylasha iyo xogta kombiyuutarkaaga wakhti kasta oo leh habab kala duwan oo wax lagu riixo, ama waxaad si sahal ah uga soo saari kartaa xogta la keydiyay faylalka keydka.
Noocyadeeda cusub, WinZip waxay siisaa adeegsi aad u fududa in la isticmaalo iyo astaamo horumarsan oo adeegsadayaasheeda adeegsada, waxaana si fudud u isticmaali kara isticmaalayaasha kombiyuutarka ee heerarka oo dhan. WinZip waxay isu keentaa astaamo badan oo waxtar leh sida kaydinta faylalka faylasha la duubay oo loogu talagalay isticmaaleyaasha doonaya inay ku xafidaan faylashooda si aamin ah, ikhtiyaarrada riixitaanka sare ee loogu talagalay dadka isticmaala ee doonaya inay keydiyaan cabirka faylka markay diraan e-maylka, sahamiyaha faylka horumarsan ee isticmaalayaasha doonaya inay si fudud u maraan u dhexeeya fayl, iyo kuwa kale oo badan.Waa mid ka mid ah barnaamijyada ay tahay inuu ku jiro kumbuyuutarka.
Barnaamijka, oo leh taageerada is-dhexgalka ee Yahoo !, Gmail, Outlook iyo macaamiil kale oo badan oo e-mailka ah, waxaad si fudud u dhammaystiri kartaa isku-buufinta faylka otomaatiga ah, kaydinta iyo hababka sirta marka aad rabto inaad e-mayl dirto.
Waxyaabaha Barnaamijka WinZip
Waxay bixisaa taageero dhammaan qaabab fayl Tifaftirayaasha yaqaan. Hal guji oo keliya, waad ku kala bixi kartaa zip, zipx, rar, 7z, tar, gzip, vhd, xz iyo faylal badan oo la isku cadaadiyay oo lagu kordhiyay faylal kala duwan ilbiriqsiyo.
Waxay ku siineysaa dhammaan sifooyinka maareeyaha faylka horumarsan. Si fudud ayaad u furi kartaa, wax uga beddeli kartaa, nuqul ka sameyn kartaa, guuri kartaa ama u wadaagi kartaa dhammaan faylashaada.
Waxay ilaalinaysaa arimahaaga gaarka ah iyo amnigaaga inta ugu buuxda. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad kuqariso dhammaan faylasha aad rabto intaad diiwaangelineyso.
Waxay kuu ogolaaneysaa inaad si fudud ugula wadaagto faylasha waaweyn warbaahinta bulshada, emaylka, fariimaha deg dega ah iyo adeegyada daruuraha adigoo isku cadaadinaya.
Waad ku mahadsan tahay muuqaalkeeda riixitaanka sare ee MP3, waxay kuu ogolaaneysaa inaad la wadaagto faylasha muusikada cabirro aad u yar.
Haddii aad raadineyso barnaamij deg deg ah, ammaan ah oo si fudud loo isticmaali karo oo loogu talagalay isku-buufinta faylasha iyo hawlgallada hoos u dhaca, waxaan si adag kugula talineynaa inaad isku daydo WinZip.
* Kadib rakibida WinZip, waxaad bilaabi kartaa adeegsiga nooca tijaabada adigoo gujinaya batoonka Isticmaalka Qaybta Qiimaynta.
Cabirka Faylka: 0.95 MB
Horumar: WinZip Computing
UC Browser, oo ka mid ah daalacashada ugu caansan ee aaladaha mobilada, wuxuu horey u gaadhay...
Hello Deriska 2 wuxuu ku jiraa Steam! Hello Deriska 2 Alpha 1, mid ka mid ah cayayaanka ugu xun ee...